Mpanamboatra volo misarom-bolo tarehy Mpanamboatra sy mpamatsy volo tarehy | Enimei
4 amin'ny 1 mpanala volo: mpanala volo sy volo volo & fanaratra tarehy ary fanamasoana volomaso hihaona amin'ny filanao fanesorana volo samihafa, safidy mety indrindra amin'ny fanesorana volo amin'ny vatana amin'ny trimmer tsy misy fanaintainana.
Azo antoka & tsy misy fanaintainana: Ity volom-bolo ity dia mampiasa lelà vy tsy misy fangarony avo lenta, tsy manimba ny hoditrao. Tsy manala volo amin'ny hoditra izy io fa manakaiky ny faka faka.
Mora ampiasaina & madio: Ny loha samihafa azo soloina dia manamora ny fanadiovana tsara ny volo tsy ilaina. Ny haavon'ny rano tsy misy rano dia IPX6 ary mamela anao hanasa lohan'ny fanapahana eo ambanin'ny rano mandeha izy.
Portable rechargeable USB: ity dia mpanaratra kely tsy misy tariby izay ampiasain'ny banky herinaratra, charger USB, solosaina finday na fitaovana enti-miasa, izay azonao ampiasaina maimaimpoana na oviana na aiza. Aza manahy mihitsy ny hahazo henatra entin'ny fijanonana miasa.
Torolàlana momba ny asa:
1. Tandremo tsara rehefa mampiasa azy io hikasika ny hoditra.
2. Esory ny fonony, hahazoana antoka fa tsy misy fahasimbana na fihoarana endrika ny antsy.
3. Raha tsy mandeha ny vokatrao na ny feon'ny môtô dia maneno samll rehefa navadika "ON", dia andramo indray.
4. Apetaho amin'ny hoditra ireo fitaovana, afindra moramora amin'ny endriny.
5. Vonoina ny herinaratra ary sarony ny saron-doha miaro.
6. Torohevitra fiampangana: rehefa nijanona izy dia ho mena ny jiro, aorian'ny famaranana tanteraka, hijanona ny jiro, ho faty.
- Mini Portable Lipstick manafoana ny volo tarehy
- Fanalana volo tsy misy fanaintainana, fomba hypoallergenic hanalana ny volo tarehy sy vatana tsy ilaina
- Tsy tantera-drano, IPX6
- Mety amin'ny vehivavy
1. Aiza no afaka misoloka azy?
Manome anao vatan-tongotra malama ny volo efatra-iray: Karakarao ny volomaso / Am / Tongotra / Orona orona / molotra
2. Mpanaratra efatra-iray-iray, hikarakara ny hoditra
Manasa vatana manontolo / interface USB miharatra fiharatra 1
3. Fitaovana antsy 3D mitsingevana
Ny volavolan-doha fanapahana dia mahatonga anao hahatsapa ho maivamaivana kokoa amin'ny fampiasana
4. Karakarao mora foana ny volomasonao raha tsy eo
manahy ny handratra ny hoditrao
6. Esory ny lohan'ny fanapahana, mora soloina
Volon-doha isan-karazany ho an'ny fanoloana haingana
7. Shaver iray dia afaka manatanteraka tanjona 4
Loha efatra fanapahana (volomaso timingsideburn timminghnose tiingshaven)
8. Afaka manaratra ny volo amin'ny faritra rehetra amin'ny
ny vatana no manaratra ny volo maditra sy tsara
fakany tsy misy ravina
Mpiharatra ho an'ny vehivavy
9. Sakano ny volo orona tsy hitombo any ivelany
samy afaka mampiasa na lahy na vavy
Mpanapaka volo orona
10. Vatana milamina, matevina ary mora entina
Azonao atao ny mametraka azy ao anaty kitapo kosmetikao ary mampiasa azy rehefa mandeha ianao
Traikefa ahazoana aina, avelao ianao hametraka azy
11. Manasa vatana manontolo
Azo ampiasaina maina na lena
Famandrihana USB mety
Ny famandrihana dia mety tokoa
afaka mandoa vola amin'ny toerana rehetra ianao
12. 3D lohan'ny fiharatana mitsingevana
Mitsingevana havia sy havanana, miady mafy amin'ny hoditra / Bikini area / Tarehy / Molotra / Armpit / Am / tongotra
Teo aloha: Rechargeable Portable Manual Electric Electric Stainless Nose Hair Trimmer
Manaraka: Borosy vita amin'ny tsiranoka vita amin'ny herinaratra elektrika miaraka amin'ny tanany lava
Clip mametaka volo sy orona
Mpanapaka volo amin'ny orona
Mpanapitsim-bolo orona elektrika
Lehilahy mpikapa volo
Mpanapaka volo an'ny olona
Mpanapaka volo lehilahy
Mpanapaka volo orona ho an'ny lehilahy
Orona mpanapaka volo azo averina famerenana
Lehilahy azo haverina volo
Mpanety volo orona azo entina ho an'ny lehilahy
Mpanapaka fanesorana volo amin'ny vatan'ny vehivavy
Rechargeable Portable Manual Electric Electric ...